Yintoni eyenziwa nguTadalafil? | U-AASraw uthenge i powder steroid eluhlaza
/Blog/tadalafil/Yintoni eyenziwa nguTadalafil?
ezaposwa ngomhla 10 / 11 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo tadalafil.
phantsi kwegama isetyenziselwa ukuphatha i-erectile dysfunction (impotence) kunye neempawu ze-prostatic hypertrophy (i-prostate eyandisiweyo). Olunye uhlobo lwe-tadalafil yi-Adcirca, esetyenziselwa ukunyanga i-pulmonary arterial hypertension kunye nokuphucula umthamo wokusebenza emadodeni nakwabasetyhini.
lonyango lonyango elisetyenziselwa ukuphathisa ukungabi namandla, owaziwayo njengemithi e-erectile (ED), kunye neempawu zeprotate ephezulu (benign prostatic hyperplasia, okanye i-BPH). Kwakhona kusetyenziselwa ukuphucula amandla okusebenzisa abantu abanegazi lomngcipheko we-pulmonary. I-Tadalafil inxalenye yeyeza ebizwa ngokuba yi-phosphodiesterase 5 (PDE5) inhibitors. Isebenza ngokunyusa ukuhamba kwegazi kwi-penis ngexesha lokuvuselela ngokwesondo. Inokuphinda ikhulule iprotrate kunye ne-bladder.
I-Tadalafil ifika kwifom yefribhethi kwaye inokuthathwa ngexesha elilodwa ngaphambi kokuba ulindele ukwenza umsebenzi wesondo, okanye kwi-dose ephantsi, kanye ngosuku.
Iziphumo eziqhelekileyo zeziphumo ziquka intloko, ukunyanzelisa, ubuhlungu beentlungu, kunye nokugqithisa ubuso. Musa ukuthatha i-tadalafil xa uthatha amanye amayeza ebizwa ngokuthi "nitrate."
Unokufumana ezininzi umthombo we-intanethi, kodwa kunzima ukuthenga i-Tadalafil yangempela powder online. Kukho imithombo emininzi ethengisa iimveliso eziyintengiso kwimarike. ngoko xa uthenga iTadalafil powder online, kufuneka ukhethe umthombo onokubuyiselwa.
Ingcaciso engakumbi ngemveliso echaphazelekayo,
Iyintoni i-yohimbine kwaye isebenza njani?	Kuthatha ixesha elingakanani iCialis 20mg ukusebenza?